Waa maxay sababta uu Philippe Coutinho isaga diidi doono dalab walba oo kaga yimaada Manchester United? – Gool FM
(England) June 18 2019. Philippe Coutinho ayaa iska diidi doona dalab walba oo kaga yimaada kooxda Man United xagaagan, waxaana lagu soo warramayaa iney sabab u tahay kooxdiisii hore Liverpool.
Sida ay saxaafadda kubadda cagta hadal heyso, xiddigaan kuma faraxsana garoonka Camp Nou wuxuuna doonayaa inuu isaga guuro, balse xushmadda uu u hayo kooxdisii hore Liverpool darteed ayuu isaga diidi doonaa dalab walba oo kaga yimaada garoonka Old Trafford.
Red Devils waxey xagaagan dooneysaa iney dib u dhisto kooxdeeda, 27-jirka reer Brazil ayaana ka mid ah xididgaha ay isha la raaceyso kuwaas oo la aaminsan yahay inuu ku guuleysan karo waqtigiisa kooxda maadaama uu Premier League horay wacdaro uga dhigay.
Sky Sports News ayaa ku warrameysa in Coutinho uusan marnaba ogolaaneynin inuu Old Trafford ku biiro isagoo xasuuso qurux badan ka heysta Anfield intii u dhaxeysay 2013-2018.
Xiddigan waayahiisa kubadda cagta kasoo bilaabay Vasca da Gama oo ah koox ka dhisan Brazil, sidoo kalana usoo ciyaaray kooxaha Inter Milan iyo Espanyol ka hor inta uusan ku biirin kooxda ka dhisan gobolka Merseyside.
Sidaas darteed kooxda uu hogaamiyo Ole Gunnar marnaba kuma tashan doonaan helitaanka xiddigaan xitaa hadii uu ka baxo Paul Pogba oo ay waqtigaan doonayaan iney ciyaar adag la ciyaaraan.